Friday May 29, 2020 - 09:51:20 in Articles by Hadhwanaag News
W/Q: Maxamuud C/llahi Axmed
Bisha May 18keedii 2020 ayey dhalinyaro ka soo saareen Hargeysa baaq la baxay "Baaq Shacab", kaasoo u soo jeediyey dawladda Somaliland inay dalka ku soo dabbaasho himiladii shacabka ee ahayd qaran ku dhisan caddaald iyo sinnaan.
Arrimaha ku qornaa "Baaq Shacab" ma ahayn kuwo cusub, waxase cusbaa keliya dhalinyaro tiradaa le'egi inay qoraal sidaa u dhigan warbaahinta soo mariyaan.
Qormadani ku dheeraan mayso ku tumushada xuquuqda shakhsiga, oo ah jawr-fal caddaaladeed, waxa inagaga filan warbixintii Amnesty International: Somaliland - Escalating Censorship, Harassment, Prosecution of Government critics; ee 4tii July 2019. Taasoo faahfaahisay xadgudubyada dawladda SL ee xorriyadda qofka.
Qodobka 14aad ee Xeerka no. 12 ee sannadkii 2000, wuxu qorayaa, "Degmooyinka kastamada ku yaaliin waxay xaq u yeelanayaan in W/Maaliyaddu u qaado (10%) oo ay ku yeelanayso Cashuurta Guud ee Dawladda Dhexe (Customs Duty) ka qaado furdadaasi."
Haddaba dalka labo degmo keliya ayey ku yaaliin kastamo: Berbera iyo Gabiley. Labadaa degmo ayaa xeer no. 12 siiyey bursi-dheeraad ah oo ay ka qaataan qasnadda dawladda. Sababtu wax kale ma aha, waxa ku yaalkastam cashuur lagu qaado.Ma tahay sabab macquul oo lagu qanco? Ogow in meel kasta kastam noqon karto.
Waxa intaa raaca in degmooyinkaasi ay ka qayb-galaan kabka (12.5% dakhliga cashuuraha) ee dawladda dhexe u qaybiso degmooyinka dalka. Waxa kale oo intaa dheer in shaqaalaha wasaaradaha ee ka hawl-gala degmooyinkaas, sida degmooyinka kaleba,aydawladda dhexe bixiso kharashkooda.
Hadda bal garoo, badeecadda soo marta kastamyadaas, cashuurtalagagaqaado ganacsatada waxay u soo gudbiyaan macaamiisha (customers/consumers). Qof kasta oo gasiinta kiiloo raashin ah oo ka soo degay furdada Berbera, ama ku qayila mijin qaad ah oo soo martay Kala-Baydh (Gabiley) ayaa bixiya cashuurta ku xaroota qasnadda dawladda. Ma aha lacag ay Berbera iyo Gebiley gooni u bixiyeen.
John Rawls (1921 - 2002) oo qoray buugga Thoery of Justice, laguna tixgeliyo aragtidiisa cadaaladda dawliga ah, wuxu u dhigay qaacidooyin kooban. Wuxu yidhi si loo helo caddaalad waa in mujtamaca loo habeeyo: (1) lama taab-taan inay tahay xuquuqda qofka sida tacbiirka fekerka iwm; (2) sidii dheef iyo fursdao badan loo siin lahaa dadka ugu baahi badan/tabarta yar (disadvantaged); (3) iyo haddii ay jirto in cid loo burinayo, waa inburintaas faa'ido ugu jirtaa mujtamaca oodhan (sida mushaharka oo loo badiyo dhakhtar naf badbaadinya).
Wasiirka Maaliyadda - Sacad Cali Shire - mar wax laga weydiiyey arrinkaas, shir ka dhacay Hotel Ambassador bishii January 2020, oo ay soo qaban-qaabiyeen machadka ISIR, wuu ka meemeeray bal inuu u qiil-baxsho 10%-ka sharcigu u qoondeeyey dawladaha hoose ee labadaas degmo.
Daw bay noqotay, in markaa, la is-weydiiyoma loo siman yahay Somaliland? Wax kale ba ha joogaane, hortu, waa caddahay:dawladda dhexe (W/Maaliyadda) ee SL ma sinto degmooyinka dalka.
Yaabku se wuxu yahay in sinnaan la'aanta degmooyinka lagu xardhay sharciga (Xeer no 12, Qodob 14, ee xeerka cashuuraha).